LENOVO က G700 များအတွက်ယာဉ်မောင်း DOWNLOAD - မောင်းသူ - 2019
Lenovo က G700 များအတွက်ယာဉ်မောင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး install
မဆိုစာရေးကိရိယာသို့မဟုတ်ခရီးဆောင်ကွန်ပျူတာအားလုံးဟာ့ဒ်ဝဲအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အကိရိယာများ၏မှန်ကန်သောစစ်ဆင်ရေးသေချာတစ်ခု operating system ကိုဒါပေမယ့်လည်း drivers တွေကိုသာလိုအပ်ပါသည်။ ဒီနေ့သူတို့ဒေါင်းလုတ်လုပ်ကာလက်ပ်တော့ Lenovo က G700 အပေါ် install ဘယ်လိုပြောပြပါ။
Lenovo က G700 များအတွက်ယာဉ်မောင်းရှာရန်
အောက်ကအရာရှိတဦးကသူ၏ထုတ်လုပ်သူကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့်အဆုံးသတ်ချိန် မှစ. ငါတို့သည် Lenovo က G700 များအတွက်ယာဉ်မောင်းကိုရှာဖွေအားလုံးရရှိနိုင်ရွေးချယ်စရာမှာကြည့်ရှုမည် "စံ", Window အားဖွငျ့ဖေါ်ပေးလိုက်ပြီ။ အဲဒီနှစျခုအစွန်းအကြားတစ်လောကလုံးနည်းလမ်းများ, ဒါပေမယ့်ပထမဦးဆုံးပထမဦးဆုံးအမှုအရာရှိပါသည်။
Method ကို 1: ပံ့ပိုးမှု 's Page
ထုတ်လုပ်သူ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် - ဤအဓိကအားအချို့သောပစ္စည်းကရိယာများအတွက်လိုအပ်သော software ကိုလျှောက်ထားသင့်ပါတယ်ရသောဖို့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ နဲ့ web အရင်းအမြစ် Lenovo ကစံပြမဖြစ်ပါစေ, အရေးအကြီးဆုံးကတော့ Lenovo က G700 အဘို့အတည်ငြိမ် drivers တွေကိုအသုံးပြုနိုင်ရန်အလွန်အဆင်ပြေသည်မဟုတ်, သူကနောက်ဆုံးပေါ်တင်ဆက်ကြောင်းနှင့်။
စာမျက်နှာ Lenovo ကထုတ်ကုန်ကိုထောကျပံ့
အပေါ်ကလင့်ခ်အားလုံး Lenovo ကထုတ်ကုန်ကိုထောကျပံ့ဖို့စာမကျြနှာကိုသင်ယူပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့သည်လည်းတိကျတဲ့အမျိုးအစားစိတ်ဝင်စား - "လက်ပ်တော့များနှင့် Netbook များ".
နှစ်ခု drop-down စာရင်းကိုအထက်ညွှန်ပြခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးနောက်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အသီးသီးက G စီးရီးလက်ပ်တော့ (IdeaPad) နှင့် G700 Laptop ကို (Lenovo က): တစ်ဦးအထူးသဖြင့် Laptop တစ်လုံးမော်ဒယ် - ပထမတစ်ခုစီးရီးကို select, ဒုတိယသငျ့သညျ။
သောစာမျက်နှာ redirected ပါလိမ့်မည်ထိုခဏခြင်းတွင်အပြီး "ယာဉ်မောင်းများနှင့် Software များ"အရာတွင်သင်သည်အနည်းငယ်ပိုပြီး Drop-down စာရင်းကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အရေးအပါဆုံးပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါသည် - "Operating System ကို"။ က Expand နှင့် Windows ကိုသင့်ရဲ့ Laptop ကိုပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်ဖြစ်သောဗားရှင်းနဲ့နည်းနည်းအတိမ်အနက်, စစျဆေးကိုရွေးပါ။ ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွက် "Components" သင်ကိရိယာများ၏အမျိုးအစားကိုသင်ဒေါင်းလုတ်လုပ်ချင်သောယာဉ်မောင်းများရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ညွှန်ပြချက် "Issue နေ့စွဲ" ဒါဟာသင်တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်ကာလအတွက် software များရှာဖွေနေပါသည်သာလြှငျအသုံးဝင်သောဖြစ်လိမ့်မည်။ tab ကို "အလေးအနက်ထား" စသည်တို့ကိုယာဉ်မောင်းများ၏ဒီဂရီ၏အရေးပါမှုသည်အဆိုပြုထားသောစာရင်းထဲတွင်ပစ္စည်းအရေအတွက်မှတ်သားစေခြင်းငှါ - ကပြင်းထန်စွာလိုအပ်သောအနေဖြင့်စီးပွားဖြစ် utilities အတူအားလုံးရရှိနိုင်အထိပါပဲ။
ဘယ်အချိန်မှာအားလုံးသို့မဟုတ်မှသာအရေးအပါဆုံးသတင်းအချက်အလက် (OS ကို Windows က), အနည်းငယ်နိမ့်ဆင်း scroll ။ ကာလက်ပ်တော့ Lenovo က G700 မှဒေါင်းလုပ်လုပ်ရမည်ဖြစ်သည်နိုင်ပါတယ်သမျှသောဆော့ဖ်ဝဲကိုအစိတ်အပိုင်းများစာရင်းတစ်ခုရှိပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ထဲကတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ပထမဆုံးလိုအပ်ချက်ကတော့ဆင်းမြှားအပေါ်ကို double-click နှိပ်. လုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့မှရသောသီးခြားစာရင်း, ကိုယ်စားပြုတယ်။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်နိုင် "ဒေါင်းလုပ်" သင့်လျော်သော button ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ယာဉ်မောင်း။
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအားလုံးအစိတ်အပိုင်းများကိုအတူပြုခံရဖို့ဆင်တူလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့် - စာရင်းတွင်တိုးချဲ့နှင့် Boot တက်သွားပါ။
သင့် browser ဖွင့်လှစ်သောပြတင်းပေါက်၌အတည်ပြုချက်ကိုမှတ်ချက်ဒေါင်းလုပ်ရန်လိုအပ်သည်ဆိုပါက "Explorer ကို" သင်သည်သူတို့၏အမည်အားပြောင်းလဲပစ်နှင့် button ကို click ရန်ဆန္ဒရှိလျှင်, executable file ကို save လုပ်ဖို့ဖိုင်တွဲ "Save".
သင်တစ်ဦးလက်ပ်တော့ပေါ်မှာရှိသမျှဒရိုင်ဘာဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးတာနဲ့, သူတို့ရဲ့ installation ကိုသွားပါ။
executable file ကို run နှင့် Setup Wizard '၏စံအကြံပြုချက်များအတိုင်းလိုက်နာ။ ထို့ကြောင့်တစ်ဦးချင်းစီကိုဒေါင်းလုဒ်ကားမောင်းသူအတွက် install လုပ်ပါ, အဲဒီနောက် reboot ။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: မှာ Windows 10 မှာ Programs ကို Add သို့မဟုတ် Remove
Method ကို 2: ကော်ပိုရိတ်ကို web crawler
Lenovo ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးက site ကိုသူတို့ရဲ့မှတ်စုစာအုပ်၏ပိုင်ရှင်များနှင့်အထက်ကိုဆှေးနှေးထက်အနည်းငယ်ပိုအဆင်ပြေကားမောင်းသူရှာဖွေရေး option ကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကကိုယ့်ကြောင့်အမြဲတမ်း Lenovo က G700 ၏အမှု၌အပါအဝင်ဿုံအလုပ်မလုပ်ပါဘူးပါပဲ။
ထပ်ခါတလဲလဲယခင်နည်းလမ်း 1-2 လုပ်ပါ။ စာမျက်နှာပေါ်ပြီးတာနဲ့ "ယာဉ်မောင်းများနှင့် Software များ"အဆိုပါ tab ကိုသွားပြီး "အလိုအလျောက်ယာဉ်မောင်းကို update" နှင့်ခလုတ်ပေါ်မှာနှိပ် "Start ကိုစကင်".
စမ်းသပ်ပြီးပြည့်စုံသည်အထိစောင့်ဆိုင်း, ထို့နောက်စာမျက်နှာအထူးသင့်ရဲ့ Lenovo က G700 ဘို့ရွေးကောက်, ယာဉ်မောင်းများ၏စာရင်းကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ယခင်နည်းလမ်း၏ခြေလှမ်းများ 4-5 မှာဖော်ပြထားတဲ့အဆင့်တွင်အောက်ပါတို့ကိုအားလုံးသို့မဟုတ်ပါကလိုအပ်သောယူဆပါသည်ကြောင့်သူတို့သာ download လုပ်ပါ။
ယာဉ်မောင်းအမြဲမှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်မအလိုအလျှောက်ရှာဖွေနိုင်စွမ်းပေးကံမကောင်းစွာပဲအဆိုပါ Lenovo က Web ကိုဝန်ဆောင်မှု။ တစ်ခါတစ်ရံစစ်ဆေးမှုများအပြုသဘောရလာဒ်များမပေးပါဘူး, အောက်ပါသတင်းစကားဖြင့်လိုက်ပါသွားသည်:
ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သငျသညျအထကျကိုပြတင်းပေါက်၌ပူဇော်သောအဘယျသို့ပွုရပါ - tools များ Lenovo ကဝန်ဆောင်မှုတံတားသုံးပြီးနှုနျးဖို့။
စာနယ်ဇင်းများ "Agree" လိုင်စင်သဘောတူညီချက်နှင့်အတူပြတင်းပေါက်အောက်မှာနှင့်သင့်ကွန်ပျူတာမှ installation ဖိုင်သိမ်းဆည်းပါ။
ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းနှင့်အတူစတင်အထက်ပါအဆင့်များကိုပြန်လုပ်ထို့နောက်သူကပြေး installation ကိုကုမ္ပဏီတစ်ခုကလျှောက်လွှာလုပ်ဆောင်။
Method ကို 3: အဆိုပါကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလျှောက်လွှာ
စီးပှားရေး software ကို developer များအသင့်လျော်ယာဉ်မောင်းများအတွက်ရှာဖွေဘယ်လောက်ခက်ခဲကြောင့်အများအပြားသည်အသုံးပြုသူများမှပေးထား၏ကောင်းစွာသတိပြုမိဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့တစ်တွေမျှမျှတတရိုးရှင်းတဲ့ဖြေရှင်းချက်ပူဇော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ - task ကိုအပေါ်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယူပြီး, အထူးပြုအစီအစဉ်များ။ ယခင်ကကျနော်တို့ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကဒီရွေးချယ်ရေးအကြံပြု start, ပြီးတော့သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်စေခြင်းငှါ, အသေးစိတ်၌ဤအပိုင်းကို၏အဓိကကိုယ်စားလှယ်များဆန်းစစ်ခဲ့သည်။
အသေးစိတ်: ယာဉ်မောင်းများ၏အလိုအလျှောက်တပ်ဆင်ခြင်းများအတွက် Applications ကို
အပေါ်က link ကိုတကျိပ်နှစ်ပါးအစီအစဉ်များကိုဖော်ပြထားတယ်ဆောင်းပါးမှာတော့သင်တို့သည်လည်းတစ်ဦးတည်းသာအလုံအလောက်ပါလိမ့်မည် - ရှာဖွေတာနှင့် Lenovo က G700 အပေါ်ယာဉ်မောင်းကို install နှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှသူတို့ထဲကတစုံတယောက်သောသူသည်။ သို့သော်လည်းကျနော်တို့ကဤရည်ရွယ်ချက်များ DriverPack Solution သို့မဟုတ် DriverMax များအတွက်သုံးစွဲဖို့အကြံပြု - သူတို့မသာအခမဲ့ဖြစ်ကြောင်း, ဒါပေမယ့်လည်းသူ့ကိုသံနှင့်ဆက်စပ်ဆော့ဖ်ဝဲအကြီးဆုံးဒေတာဘေ့စနှင့်ပြည့်စုံ။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့သူတို့တစ်ဦးစီနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်ဖို့ခြေလှမ်းလမ်းညွှန်တစ်ဦးခြေလှမ်းရှိသည်။
Read more: အစီအစဉ်များကိုသုံးပါနှင့် Solyushn DrayverMaks drayverpak လုပ်နည်း
Method ကို 4: ပစ္စည်း Identifier
တစ်ယူနစ်အဖြစ်လည်ပတ်သည့်အပြန်အလှန် devices များ - ဟာ့ဒ်ဝဲအစိတ်အပိုင်းများကိုတစ်ခုဗဟု၏ရေးစပ်စာရေးကိရိယာကွန်ပျူတာများ, အဖြစ် laptops ။ ဒီကွင်းဆက်အတွက်တစ်ဦးချင်းစီလင့်ခ် (ID ကိုအဖြစ်အတိုကောက်) ထူးခြားတဲ့ရထားလမ်းပစ္စည်းကိရိယာများညွှန်ပြချက်နှင့်ပြည့်စုံသည်။ ယင်း၏တန်ဖိုးကို သိ. သင်အလွယ်တကူမှန်ကန်သောဒရိုင်ဘာရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ရရှိရန်ရှာအံ့သောငှါသင့်တယ် "Device Manager"ထိုအခါသင်သည် ID အနေဖြင့်ရှာဖွေဖို့အခွင့်အလမ်းပေးမယ့်အထူးပြုက်ဘ်အရင်းအမြစ်များအပေါ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုအသုံးပြုရမည်။ Lenovo က G700 - - သင်တို့သည်ငါတို့၏ဆောင်းပါး၏သူရဲကောင်းများအတွက်အပါအဝင်ယာဉ်မောင်းဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်ရာမှတဆင့်အသေးစိတ်လမ်းညွှန်မှု, အောက်က link ကိုပေါ်တင်သွင်းပစ္စည်းထွက်မသတ်မှတ်နေကြသည်။
အသေးစိတ်: တစ်ကားမောင်းသူရှာဖွေရေးကိရိယာတခုအဖြစ်ပစ္စည်းကိရိယာ Identifier
Method ကို 5: "Device Manager"
ဤသည် operating system ကို tool ကို, ထိုပစ္စည်းကိရိယာများနဲ့ပတျသကျတဲ့ ID ကိုများနှင့်အခြားသတင်းအချက်အလက်များလက်ခံခြင်းအပြင်ကိုတိုက်ရိုက် download ပြုလုပ်ကိုလည်း operated နှင့်ယာဉ်မောင်းကို install နိုင်ပါတယ်။ ဒီနေ့ရဲ့စိန်ခေါ်မှုများဘို့ငါတို့ဖြေရှင်းချက်ကို အသုံးပြု. များ၏အားနည်းချက် 'Device Manager " ဒါဟာရှာဖွေရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသံအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီအဘို့ကို manually run ဖို့လိုအပ်နိုင်ပါသည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတည်ရှိသည်။ သို့သော်ဤအမှု၌အားသာချက်အများကြီးပိုအရေးကြီးပါတယ် - အားလုံးလုပ်ရပ်များဘယ်ဆိုက်ကိုနှင့် Third-party အစီအစဉ်များ၏အသုံးပြုမှုကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်မလိုဘဲ, ထိုဖြစ်ပါသည်, တစ်ဦးကို Windows ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဖျော်ဖြေနေကြသည်။ , စနစ်တကျ Lenovo က G700 ရန်အတွက်လည်းအသုံးပြုနိုင်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ပေါ်တွင်သီးခြားဆောင်းပါးထဲမှာရှိနိုင်ပါသည်။
Read more: က "Device Manager" ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ယာဉ်မောင်းကိုရှာပါနဲ့ကို update
ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတင်ပြထားသောနည်းလမ်းမဆိုဆောင်းပါး၏ဘာသာရပ်ပြဿနာအတွက် Voice ဖြေရှင်းနိုင်သည် - Laptop ကို Lenovo က G700 များအတွက်ယာဉ်မောင်း download လုပ်ပါ။ သူတို့ထဲကတချို့ကတစ်ဦးကို manual ရှာဖွေရေးနှင့် installation ကိုပါဝင်ပတ်သက်နေ, အခြားသူများကိုအလိုအလျောက်လုပ်နေကြသည်။